Sideed kun oo bukaan oo u dhashay yemen oo qarka u saaran in a... | Universal Somali TV
Sideed kun oo bukaan oo u dhashay yemen oo qarka u saaran in ay u geeriyoodaan xanuunka kilyaha
Wasaarada caafimaadka Yemen ayaa ka digtay in ka badan sideed kun oo bukaan oo qaba cudurka kilyo xanuunka ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan hadii ay sii socoto xayiraada ay xulufada sacuudiga ku hayaan qeybo ka mid ah dalkaas.
Dr. Taha al-Mutawakel ayaa u sheegay warbaahinta maxaliga ah ee gudaha in bukaanada qaba cudurka ku dhaca kilyaha la daweeyo todobaadkii sadex mar balse aysan sii socon doonin,hadii la waayo daawo ku filan.
Waxaa uu intaa raaciyay in afartii bil ee la soo dhaafay ay u baahnaayeen hal million oo kilyo sifeyn ah in ay sameyaan,balse ay ku adkaatay in ay daboolaan in ka badan 10,000.
Dowlada sacuudiga oo hogaamineysa howlgalka ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta ayaa lagu eedeyay in ay is hor istaag ku sameyneyso gargaarka daawada ah ee ka soo dega dekada magaalada Xudeydah ee koonfurta Yemen.
Kan-xigaFaafaahin dheeraad ah oo ka soo baxay...
Kan-horePakistaan oo isaga baxday howlgalka b...
45,934,928 unique visits